I-Iron Curtain 2.0: I-Belarus ithintela abemi ukuba bashiye ilizwe
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseBelarus zokuhamba » I-Iron Curtain 2.0: I-Belarus ithintela abemi ukuba bashiye ilizwe
Abemi baseBelarusian abanazizathu zokushiya ilizwe, amagosa aseburhulumenteni athi.
IBelarus ithintela abemi bayo ekuhambeleni phesheya
I-Belarus ithi ibango lokuphuma liyimfuneko ukunqanda ukusasazeka kwesifo se-COVID-19
Imizamo yasekhaya yaseBelarus yokulawula ukusasazeka kwentsholongwane iphantse ayikho
Amagosa emida yaseBelarusian aqinise iinzame zawo zokuthintela abemi baseBelarus ekuzameni ukuphuma kweli lizwe.
Ngabemi baseBelarusian kuphela abavunyelweyo ukushiya iBelarus ngabo banobungqina bokuhlala ngokusisigxina kwilizwe langaphandle.
IKomiti yaseBelarusian State Border ikhuphe ingxelo kule veki isithi "kutshanje ifumene izibheno ezininzi" kwabo banqwenela ukushiya ilizwe. "Sicacisa ngokusesikweni ukuba ukusukela nge-21 kaDisemba 2020, ukuphuma kuphume okwethutyana kubemi baseBelarus."
Ngaphandle, amagosa athi, aya kwenziwa kuphela kwabo banobungqina bokuhlala ngokusisigxina kwilizwe langaphandle. Abo banevisa okanye imvume yokuhlala okwexeshana “abanazizathu zokumka kweli lizwe.”
Amanyathelo anzima emngceleni, amagosa athi, ayimfuneko ukunqanda ukusasazeka kwesibetho se-COVID-19. Nangona kunjalo, bathetha ngeenzame zaseBelarus ezingekhoyo zokulawula ukusasazeka kwintsholongwane. Abemi abavela phesheya kolwandle akufuneki bathathe uvavanyo lwe-coronavirus, kwaye ilizwe belingavumi ukwazisa ukuvalwa kwelizwe.
Ekuqaleni kobhubhane, uzwilakhe wase-Belarusian uLukashenko wabhengeza ukuba ukusela ivodka kunye nokutyelela i-sauna kuya kuba yeyona ndlela ilungileyo yokukhusela i-COVID-19. Ukwathe ukudlala imidlalo elungelelanisiweyo yayilunyango olusebenzayo, kwaye “kungcono ukufa umi ngeenyawo kunokuba uphile emadolweni.”
Uzwilakhe wase-Belarus kunye namapolisa akhe afihlakeleyo bazobe isaqhwithi sokugwetywa kwihlabathi liphela kwiveki ephelileyo Ryanair Inqwelo moya eyayisuka eGrisi yaya eLithuania yaxhwilwa yaza yanyanzelwa ukuba iye eMinsk ngoMeyi 23. Ngenye indlela, iiarhente zikarhulumente zikhawuleze zabamba umhleli wejelo leTelegram elingavunyelwanga, uRoman Protasevich, kunye nentombi awayethandana nayo, ilizwe laseRashiya uSofia Sapega, ababephakathi abakhweli bendiza.
I-European Union, echaze ukuqweqwediswa kwenqwelomoya iRyanair “njengobuqhophololo baseburhulumenteni,” ngoku ilungiselela ipakethe yezonyukelo ngokuchasene nenqwelomoya yenqwelomoya yelizwe laseBelarus, nangamagosa aphantse abe lishumi elinambini. I-Belavia, umphathi weflegi yelizwe, uvaliwe ngokufanelekileyo kwiindawo zamazwe angamalungu e-EU ukusukela kwiveki ephelileyo, kwaye uninzi lweenqwelomoya zeenqwelomoya zithintela iindlela ezidlula eBelarus.
Ngokutsho konozakuzaku we-EU ongachazwanga ngegama, "onke amazwe e-EU ayavumelana nale ndlela." Umthunywa wesibini wongeze ngelithi isohlwayo esitsha siza kuba "ngumqondiso ocacileyo kuLukashenko wokuba isenzo sakhe siyingozi kwaye asamkelekanga."
I-Uganda iqhuba ugonyo olukhulu lwe-COVID-19
Ubunqolobi kunye nolwaphulo-mthetho kubahambi:
Ukudubula ngobuninzi kushiya ubuncinci abantu abali-13 benzakele e-Austin, eTexas
iiyure 2 eyadlulayo